Apple haigamuchire zvigadziriso kumashandisirwo akagadzirwa newatchOS 1 SDK kutanga gore rinouya | Ndinobva mac
Mumakore achangopfuura, Apple yanga ichigara ichizivisa vese vanogadzira nezve kukosha kwekuvandudza yavo 32-bit application kuti ienderane zvizere ne64-bit processors, mamwe ma processor akatanga kushandiswa muApple terminals kubva kuIphone 5s, ichi chiri chekutanga kuzviita.
Nekuuya kweIOS 11, ese maapplication asina kuvandudzwa akasiyiwa, saka haachawanikwe kumatemu ese anowirirana neIOS 11. Zvinotaridza kuti danho rinotevera raApple kutanga kuchenesa muApp Store rinokanganisa. iwo mafomu anoenderana newatchOS 1, yekutanga vhezheni yeApple Watch inoshanda sisitimu.
Pane yeApple yekuvandudza portal, iye anokurudzira vese vanogadzira vakaburitsa maapplication avo nekuburitswa kwewatchOS 1 ku kugadzirisa kuWOSOS 4 kuti ienderane neyese Apple Watch mhando parizvino inowanikwa kutengeswa neApple, kusanganisira Apple Watch Series 3. Nekuvandudza mashandisiro kuOSOS 4, vagadziri vanozotora mukana wehunyoro uye hwekuita mabhenefiti akawedzeredzwa papuratifomu mushanduro dzichangoburwa neApple kumusika. pamusoro pekuti wakawedzera muganho wekushandisa kubva pa50 kusvika 75 MB.
Apple ichaenderera ichitambira mishumo yemhando idzi dzekushandisa kusvika muna Kubvumbi 1, 2018, Zuva raApril Mapenzi muAmerica. Kubva muna Kubvumbi 2, Apple haichazogashira zvikumbiro zvinoda kugadzirisa kana izvo zvakagadzirwa neiyo watchOS SDK 1. Iyo yekuvandudza inofanirwa kuitwa neiyo watchOS 2 SDK kana gare gare. Kana chiri chishandiso chitsva, chinofanirwa kunge chakagadzirwa neiyo watchOS 4 SDK kana gare gare.
Apple parizvino iri kuvandudza watchOS 4.2 iri mubeta rechitatu, uye iyo vhezheni yayo yekupedzisira yakarongerwa kuburitswa kupera kwegore rino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple haigamuchire zvigadziriso kumashandisirwo akagadzirwa newatchOS 1 SDK kutanga gore rinouya
Apple inotanga mushandirapamwe wayo weKisimusi nezvipo zvayo zvezvipo
Pfungwa nyowani yezvingave zvitsva Mac Mini, naLouis Berger